Iyo mod 'Hafu-Hupenyu: Yakachengetwa' yakatoburitswa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
vharafu Isu tatoziva kuti ndeimwe yemakambani ari muvhidhiyo mutambo wepasi rose uyo wakagara uchitarisisa zvakanyanya kuLinux nyika, uye apo vashoma vaibheja pakuburitsa mazita eGNU / Linux, Valve akazviita nemimwe mitambo yemavhidhiyo yemanyepo yakadai wega Half-Life izvo vazhinji vedu takatamba. Zvakanaka, kune ino inonakidza vhidhiyo mutambo pane mamwe ma mods anowanikwa sezvaunonyatso ziva, kuti uwedzere kuwedzera kugona uye kutamba kweavo vese avo vatambi vanova avo.
Zvino, kubva kune yepamutemo saiti yeFututre Mitambo Sarudza ivo vakatizivisa izvo Hafu-Hupenyu: Caged mod yave kuwanikwa uye yakaburitswawo kuti tikwanise kunakidzwa nayo pane yedu yekuda GNU / Linux kugovera uye kuishandisa kune uyu wekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo. Nenzira, Cayle George akamboshanda kuValve pamapurojekiti akakosha sePortal 2 uye Team Fortress 2, uye ikozvino akabatanawo neMitambo Yemangwana yemod iyi nyowani, saka isu tinotarisira zvinhu zvakanaka. Zvakanaka, kune avo vanoiisa vachasangana neyakagadziridzwa imwechete-mutambi mushandirapamwe, zvemukati zvebhonasi zvakavhurwa, mimhanzi nyowani kubva kumuimbi Lazerhawk, mushambadzi wekunongedza maitiro, uye zvimwe zvakawanda kuti uwane ipapo ipapo neHalf-Hupenyu: Caged. Isu tanga tatoziva kuti iyi mod iri kuuya uye kuti yaizo gadzirawo iyo Linux, asi isu hatina kuziva chaizvo kuti taizoiona riini, uye pakupedzisira taive nayo kare kare kupfuura zvaitarisirwa. Nhau dzakanaka dzeiri kuuya 2018 uye ndine chokwadi chekuti munguva pfupi ndichave nenhau dzakanaka dzekutaura ...
Nenzira, tsamba yepamutemo yakazivisa yaive: «¡Yemangwana Mitambo Sarudza uye Cayle George anokupa iwe jeri rakapukunyuka kupukunyuka senge chero rimwe! Nechiito chinoputika uye ruzha nenziyo inoshamisa yemimhanzi Lazerhawk, Hafu-Hupenyu: CAGED ndiko kudzokera kuzera regoridhe revapfuri vekutanga-munhu. Buda mukutapwa, ramba uchiisa, uye tsvaga zvakavanzika zveHafu-Hupenyu: YAKABVUNZWA!".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Iyo mod 'Hafu-Hupenyu: Yakachengetwa' yakatoburitswa yeLinux